रंगको मनोविज्ञान र यसको अनुप्रयोगहरू ग्राफिक डिजाइन र विज्ञापनमा क्रिएटिव अनलाइन
रंगको मनोविज्ञान र यसको अनुप्रयोगहरू ग्राफिक डिजाइन र विज्ञापनमा
हामीलाई वरपरका जुनसुकै चीजहरू रंगले भरिएका हुन्छन्, तिनीहरू हाम्रो साथमा हुन्छन्, होशियारीका साथ वा होईन हामीलाई प्रभावउदाहरणका लागि, हाम्रो दिमागको राज्यमा र यो त्यहि हो जुन के भनेर चिनिन्छ लागू र color्ग मनोविज्ञानविशेष गरी विज्ञापन मार्केटि and र अडियोभिजुअल कार्यहरूमा जहाँ यो धेरै उपयोगी भएको छ।
1 रंगको मनोविज्ञान के हो?
2 र and र विज्ञापनमा उनीहरूको प्रयोगहरू
2.6 सुन्तला रंग
2.8 चाँदी र सुन
रंगको मनोविज्ञान के हो?
यो बारेमा छ एक विज्ञान जसले विश्लेषण अध्ययन अनुमति दिन्छ, प्रभाव, रंग, व्यवहार र मानव को धारणा को रूप मा, साथ साथै यी धारणाहरु बाट उत्पन्न भावनाहरु।
यस अवधारणाबाट, विज्ञापनदाता र ग्राफिक डिजाइनर उनीहरूले प्रयोग गर्दछ कि प्रत्येक र colorले प्रतीकात्मक क्षेत्रहरूमा उत्पाद प्लेसमेन्टको लक्ष्य प्राप्त गर्न र बिक्री सुनिश्चित गर्नका लागि।
प्रत्येक र color कसरी यस्तै छ विज्ञापन क्षेत्रमा विशेष प्रयोगहरू, यसैले गर्दा डिजाईन गर्दा र colorsहरू रणनीतिक रूपमा अक्षरहरूमा र प्याकेजिंग भरि लागू हुन्छन् (बक्सहरू, खामहरू, ब्यागहरू, इत्यादि)।
र and र विज्ञापनमा उनीहरूको प्रयोगहरू
सार्वजनिक रूपमा यो रंग चपलता, गतिको साथ संबद्ध गर्दछ र त्यसैले हामी त्यसलाई बारम्बार देख्छौं फास्ट फूड प्रतिष्ठानको विज्ञापन, जसको बहुसंख्यक दर्शकहरू बच्चाहरू र युवा मानिसहरू हुन्, साथै बिक्री वा कम-मूल्यको व्यापारमा उत्पादनहरूमा उपस्थित हुनुको साथै निहित सन्देश हो द्रुत बिक्री.
रंगको मनोविज्ञान बौद्धिकता र रचनात्मकतासँग सम्बन्धित छ र रिस र ईर्ष्यासँग पनि हो, त्यसैले यसको प्रयोग प्रतिकूल प्रभावहरूबाट बच्न सन्तुलित हुनुपर्दछ।
यदि उत्पादन एक युवा क्षेत्रको उद्देश्य हो, हल्का ब्लुज र उज्यालो टोनहरू प्रयोग गरिन्छ, यदि उनीहरू अधिक परिष्कृत र शान्त दर्शकहरूको लक्षित छन् भने, गाढा र अधिक अस्पष्ट ब्लूज उपयुक्त छन्।
रंग गहिरो भावनाहरु संग सम्बन्धित छ, सोबर छ र शान्त र शान्त प्रसारित गर्दछ, यद्यपि अधिकमा प्रयोग गरिएको छ, प्रभाव केही हदसम्म निराशाजनक हुन सक्छ।
यो सार्वजनिक गर्न प्रयोग गरिन्छ उत्पादनहरू जसले व्यक्तिगत जीवनमा लाभ ल्याउँदछ, कल्याण र सान्त्वना, जस्तै घरेलू उपकरण, दुग्धजन्य पदार्थ, फ्याट कम, बच्चा उत्पादनहरू, घर सफा गर्न को लागी, आदि। उद्देश्य निर्दोषता, पूर्ण शान्ति, शुद्ध, सम्पूर्ण र यो कसरी प्रयोग हुन्छ निर्भर गर्दै यसले शून्य प्रभाव दिन सक्छ।
विज्ञापनमा यसको प्रयोग हुन्छ कुनै पनि उत्पादन तपाईलाई विलासी देखाउन चाहानुहुन्छ, गुणस्तरको, सुरुचिपूर्ण, परिष्कृत र धातुको उपस्थिति प्रयोग गर्दै जुन यस रंगले प्रदान गर्दछ जुन धातुको चिसोपनलाई इमुलेट गर्दछ। यो रंग कालो र सेतो को मिलनबाट पैदा भएको हो र विवादास्पद भावनाहरु र कार्यहरुको मिश्रण को प्रतिनिधित्व गर्दछ, उदाहरण को लागी, दु: ख संग खुशी।
यो उत्पादनहरूको आदर्श र color्ग हो जसको लक्षित बजार बुजुर्ग हो, यसले गुणवत्ता र मध्यवर्ती मूल्यहरूको सुझाव दिन्छ। यो निर्मलता, शरद andतु र समय बित्ताको लागि सम्बन्धित छ।
रंग धेरै हडताल युवा संग पहिचान, बिक्री र केहि पदोन्नतिमा उत्पादनहरू प्रमोट गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो न्यानो समयसँग सम्बन्धित छ, आनन्द र उत्साहको साथ जुन एक मीटरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ।
यसको प्रयोग ज्यादै धेरै राम्रोसँग हेरचाह गर्नुपर्दछ, तर यो हो शैली, भव्यता र संयम प्रतिनिधित्व गर्न आदर्शयदि वस्तु लक्जरी हो, यो संकेत गरिएको रंग हो।
चाँदी र सुन
तिनीहरू लक्जरी उत्पादन, अत्तर, कपडा र अन्यको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरूको मूल्य र स्थिति पूनरावलोकन। यी शेडहरू एक ठूलो तरिकामा धन सुझाव र यसैले ती ठूला सफलताका साथ प्रयोग भएका छन्।
यसको लक्षित दर्शकहरू धेरै नै छनौट र ब्रान्डको गुणस्तर र प्रतिष्ठाको रूपमा मांग गर्दछन्, सामान्यतया वयस्क, तर यो केटाकेटी र युवाहरूका लागि केहि उत्पादनहरूमा प्रयोग हुन्छ। रंग उत्तम हुनुमा सम्बन्धित छ, आध्यात्मिक संग।
यो कुनै पनि उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ तपाईं ध्यान आकर्षण गर्न चाहनुहुन्छ, प्रस्तावहरूमा, तरलता, व्यापारिक लिलामी आदि। ठूलो शक्ति र शक्ति संग रंग अधिक प्रयोग नगर्न सल्लाह दिइन्छ।
यसको लागि उपयुक्त रंग हो प्रकृतिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको विज्ञापन गर्नुहोस्, तरकारी जस्तै ताजा संग। र Color्ग प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ, आशा र शान्तिको साथ।
हामी मध्ये जो एक सानो मा विज्ञापन विज्ञापन को लागी, यो बाट यो बुझ्नको लागी चाखलाग्दो छ र psych्ग मनोविज्ञान र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » रंगको मनोविज्ञान र यसको अनुप्रयोगहरू ग्राफिक डिजाइन र विज्ञापनमा
जोहान grajales भन्यो
जोहान ग्रेजेल्सलाई जवाफ दिनुहोस्
फ्रान्सिस्का लांगारिका विलेनुवा भन्यो
म ग्राफिक डिजाइनको साथ माया गर्छु
Francisca langarica Villanueva लाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी बौद्धिक सम्पत्ती अनलाइन सुरक्षा गर्ने